तामाको भाडाको पानी पिउँदा स्वास्थ्यलाई हुने फाइदाहरू ! | सुदुरपश्चिम खबर
तामाको भाँडामा राखिएको पानी पिउनुका १० फाइदाहरु :
बाँसको तामा, हाम्रो रैथाने परिकार हो । हुन त अहिले यसको सिजन होइन । यद्यपी जाडो याममा बाँसको तामाको परिवार निकै उपयोगी हुन्छ । बाँसको तामा मानव स्वास्थ्यको लागि निकै लाभदायक मानिन्छ । यसलाई अचार, तरकारी वा सुपको रुपमा सेवन गर्न सकिन्छ । नेपालमा मात्र नभई दक्षिण एसियामा बाँसको तामाको प्रचलन छ ।
बाँसको तामालाई गुन्द्रुक जसरी नै पकाउने गरिन्छ । त्यसका लागि पहिला बाँसको कलिलो मुन्टा भाँचेर ल्याई स(साना टुक्रा बनाउनुपर्छ । त्यसलााई केहीबेर घाममा सुकाएर सुकाएर बेसार मोल्ने र सफा माटोको भाडो या डिब्बामा हावा नछिर्ने गरी बन्द गरि राख्नुपर्छ । त्यसलाई जति लामो समय राख्यो त्यति नै अम्लिएपन बढ्दै जान्छ ।
नेपालमा तामाको परिकार सिमित छन् । नेपालमा आलु बोडी तामाको तरकारी निकै प्रचलित छ । तामाको अमिलो अचार अर्थात तामाको मेसो पनि त्यतिकै लोकप्रिय छ ।
विदेशीहरुले यसलाई थुप्रै परिकारको प्रयोजनामा प्रयोग गर्छन् । खानाको सुरुवाती समयमा एप्पीटाइजर सलादको रुपमा तामालाई लिने गरिन्छ । तामाको सुप पनि विभिन्न थरीका तयार पारिन्छ ।
थाइल्यान्डमा तोम यम कोङग, चीनमा हट एन्ड सावरमा तामा अनिवार्य हुन्छ । चीनमा त तामाको २५० भन्दा बढी परिकार तयार हुन्छ ।
बाँसको तामामा कार्बोहाइड्रेडको मात्रा अत्यन्तै कम हुन्छ । जसकारण मधुमेह रोगीको लागि यसका परिकार निकै फाइदाजनक हुन्छ ।
बाँसको तामा क्यालोरी पनि न्युन हुन्छ । त्यसैले तौल घटाउन चाहनेहरुको लागि पनि यसले फाइदा पु¥याउँछ ।
पाचन प्रकियामा समस्या छ भने पनि नियमित रुपमा तामाको सेवन गर्दा राम्रो हुन्छ । बिसाबमा सक्रमण भएका बिरामीलाई पनि तामाले औषधीको काम गर्छ ।
गर्भबती महिलालाई पनि तामा निकै स्वस्थकर मानिन्छ । यस्ता महिनालाई गर्भवतिको अन्तिम महिलामा तामा खुवाउने गरिन्छ ।
यसले ग्यास्ट्रिक र अल्सरलाई निको पार्नमा भुमिका निर्वाह गर्छ । नियमित तामाको सेवनले क्यानसरको सम्भावनालाईसमेत कम गर्छ ।
यो मुटु रोग, रक्तचाप, अत्याधिक कोलेस्ट्रोल, आन्तरिक घाउचोटको समस्यालाई नियन्त्रण गर्नका लािग तामाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।
फोक्सो सम्बन्धी बिरामीको लागि तामा अमृतसमान मानिन्छ । स्वासप्रश्वासको समस्याबाट ग्रसित विरामीलाई नियमित रुपमा तामा सेवन गर्दा ठूलो राहत दिन्छ ।
अन्तराष्ट्रिय बजारमा ‘बेम्बो शुट’को नामले बाँसको तामा विक्री गरिन्छ । क्यानमा प्याकिङ गरेको यस्तो बम्बो सुट निकै महंगो हुन्छ ।
बिश्वप्रशिद्ध थाई सुप ‘तोमयाम कोङ’मा तामा अनिवार्य हुन्छ । तामे, भालु, चोय बास या निगालोको तामा यसमा प्रयोग गरिन्छ ।
जापानिजहरुले बाँसलाई ‘किङ अफ ग्रास’कै नाम दिएर पाकशिक्षामा राखेका छन् । जहाँ बाँस र तामाको फाइदालाई पढाईन्छ ।
चीनमा पनि बाँसको तामा निकै प्रचलित छ । त्यहाँ त बासको तामा मात्र नभै पात पनि बिभिन्न हर्बल(टिको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । जुन स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ ।
जान्नुहोस् किशमिशको पानी पिउनुका यस्ता छन् फाइदै फाइदा
किशमिशका दानालाई पानीमा २० मिनेट जति सानो आगोमा उमालेर रातभर राखेर खानाले शरीरमा उत्पन्न हुने बिभिन्न समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
१. किशमिशको पानी केही दिन सम्म नियमित खानाले कब्जियत, एसिडिटी तथा थकान जस्ता समस्याबाट मुक्ति मिल्छ ।
२. किशमिश उमालेको पानी पिउनाले शरीरमा कोलेस्ट्रेरोलको मात्रा नियन्त्रण गर्नुका साथै शरीरमा ट्राइग्लिसेराइड्सको मात्रालाई कम गर्छ ।
३. यसमा फ्लेबेनाइड्स एन्टी अक्सिडेन्ट भरपुर मात्रामा पाइन्छ जसले त्वचालाई सुरक्षित तथा चमकदार बनाउन मद्दत गर्छ ।
४. दिनप्रतिदिन यसको पानीको नियमित सेवनल गर्नाले पाचन शक्ति बढाउँछ ।
५. यसको सेवनले लिभरको समस्याबाट पनि मुक्ति मिल्नुका साथै शरीरमा मोटाबोल्ज्मिको स्तरलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ ।
पानी पिउदा पनि धेरै समस्याको समाधान हुन्छ र अधिकांश रोग पेटमा नै उत्पन्न हुन्छन् त्यसैले खाली पेटमा पानी खानुको अर्थ धेरै छ। यसको प्रमुख फाइदा पेट स्वस्थ बनाउनु हो। खाली पेट पानी खादा स्वास्थ्यमा फाइदा हुने तथ्य सर्वप्रथम जापानमा प्रमाणित भएको हो।
प्राय जापानीले बिहान उठ्नेवित्तिकै चार गिलास पानी खान्छन्। पानी खाएको आधा घन्टापछि मात्र ब्रेकफास्ट लिन्छन्। यो वाटर थेरापीले उनीहरुलाई सक्रीय र स्वस्थ रहन मद्दत गरिरहेको छ। खाली पेट पानी खाँदा करिब ९० प्रतिशत रोगबाट बच्न सकिन्छ। यसमा पनि मनतातो पानी उपर्युक्त हुन्छ।
खाली पेट कागतीपानी पिउनुस्, अनेकौं रोग भगाउनुस्
कागतीले खानाको स्वाद बढाइदिन्छ । सलाद, चाट र तरकारीमा कागती निचोरेर खानुको मजा नै अर्को छ । गर्मीको मौसममा त झन् कागतीपानी पिउँदा एकदमै फाइदा हुन्छ । यसले प्यास पनि बुझाउँछ अनि ताजगी पनि कायम राख्छ । बिहानै खाली पेट कागतीपानी पिउनुभयो भने त झन् यसका धेरै फाइदा हुन्छन् ।
कागतीपानीले मुखको दुर्गन्ध पनि हटाइदिन्छ । शरीरलाई विषरहित बनाउन यसले मद्दत गर्छ ।
जोर्नीको पीडाबाट चिन्तित हुनुहुन्छ भने कागतीपानी पिउन थाल्नुस् । फाइदा पुग्छ ।
यस्ता छन् तातो पानी पिउनुका १० फाइदाहरू
जाडो मौसममा शरीरबाट पसिना कम निस्किने भएकाले पानी थोरै खाने गरिन्छ । जाडोमा हामी शरीरलाई आवश्यक पर्ने मात्रामा पानी खान पनि चुकिरहेका हुन्छौँ । यस्तोमा तातो पानी खाने बानी बसाले बढी मात्रामा पानी खाइन्छ ।
यस्ता छन् तातो पानी पिउनुका फाइदाहरू
१.थकान महसुस भएमा तातो पानीले नुहाउँदा थकान हट्छ ।
२.तातो पानीमा अलिकति गुलाबजल मिसाएर नुहाउनाले छाला राम्रो हुनुका साथै जीउ दुखेको पनि सन्चो हुन्छ ।
३.लुतोलगायत छालासम्बन्धी समस्या भएका मानिसले तातो पानीले नुहाउनु उपयूतत्त मानिन्छ ।
४.तातो पानी खानाले शरीरमा रक्तसञ्चार सुन्तुलित रहन्छ ।
५.तातो पानीमा कागतीको रस र मह मिसाएर बिहान पिउने गर्नाले रोगसँग लड्ने क्षमताको विकास हुन्छ ।
६.बिहान उठेर तातो पानी पिउनाले दिसा खलास हुन्छ जसले गर्दा कब्जियतको समस्या रहन पाउँदैन् ।
७.श्वासप्रश्ववास र किड्रनीसम्बन्धी समस्या भएकाहरूले चिसो पानीको सट्टा मनतातो पानी पिउने हुनुपर्छ । यस्तो समस्या भएका हरूले चिसो पानी खाएमा किड्नी र फोक्सो बढी उत्तेजित हुने भएकाले समस्या आउन सक्छ ।
८.तातो पानी पिउनाले हड्डी र जोर्नीसम्बन्धी समस्याबाट पनि राहत मिल्छ ।
९. मनतातो पानीले जोर्नीमा घर्षण कम गर्नाले भविकष्यमा बाथरोग लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ ।
१०.चिसो मौसममा तातो पानी पिउनाले रूघा खोकीलगायत समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।